Mashiinka mandiillada, intee jeer ayaad u baahan tahay inaad beddesho? | Ragga Stylish
Mashiinka mandiillada, intee jeer ayaad u baahan tahay inaad beddesho?
Ragga Stylish | | La xiiray, Daryeelka shaqsiyeed
Qaar badan oo naga mid ah ayaa xiirta iyagoo isticmaalaya mandiil, laakiin haddii aanan ku ilaalinayn garbahaas xaaladdooda wanaagsan, waxay dhaawici doonaan wejigeenna. Markaa waa halka uu maqaalkeennu ka bilaabmayo, isagoo na weydiinaya su’aal fudud, Immisa jeer ayaad bedeshaa makiinadaha garka?
Kaararka ugu horreeya ee la adeegsanayo daab cusub ayaa farxad u ah wejigeenna. Waxba yeeli maayaan, ma xanaajinayaan mana tagayaan timaha soo gala. Laakiin markay maalmuhu sii socdaan, garbahaasi si dhib yar ugama sii siqaadaan waana taasi meesha ay gooshu ka bilaabmayso iyo sidoo kale kan timaha soo galay.
Xilliga beddelka garbaha ayaa u dhow mid kasta. Waxaa jira kuwa adeegsada isla daab muddo bilo ah waxaana jira kuwa aan haynin wax ka badan 4 maalmood.
Laakiin haddii aad rabto inaad ogaato waxyaabaha ay tahay inaan tixgelinno, waa inaad sii wadataa akhriska ...
Eeg qaybta duubista ee garbaha dul saaran. Kooxdaani waxay u oggolaaneysaa daabku inuu si fiican u boodboodo, xaalado badanna, wuxuu ka kooban yahay waxyaabo dejiya oo ka hortagga cuncunka, sida aloe vera.
Waxaad tixgelineysaa habka aad u xiirto. Haddii aad ku sameyso ka soo horjeedka hadhuudhka, daabku wuu ka dhaqso badan yahay kuwa ku sameeya jihada timaha.
Waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid sida daabku u dareemayo wejigaaga. Haddii aad aragto wax jiidid ah ama aad leedahay timo badan oo soo qulqulaya, markaa waa hubaal in la joogo waqtigii la beddeli lahaa daabka.
Intee jeer ayaad baddelaysaa daab?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Mashiinka mandiillada, intee jeer ayaad u baahan tahay inaad beddesho?
Caadi ahaan waan beddelaa iyaga usbuuciiba hal mar, tan iyo markii aan xiirayo 2 ama 3 maalmood kasta ... laakiin weli ma taagnaan karo wax ka badan 2 ama 3 jeer isla daab
Ku jawaab Basilio
Caadi ahaan waxaan u beddelaa iyaga usbuuciiba hal mar, tan iyo markii aan xiirto 2 ama 3 maalmood kasta ... laakiin weli ma qaadan karo wax ka badan 2 ama 3 jeer isla daab ...
bil kasta ama markii loo baahdo
Xaqiiqdii waxay kuxirantahay isticmaalka. Waxaan isticmaalaa Gilette's Mach 3. Anigana waxaan u isticmaalaa iyaga 1 jeer usbuucii. Waxay hayaan 4 ama 5 xiiro.Laakiin intaas kama badna.
Laguguma talin karo inaad uga tagto iyaga qoyan ama raadad timo iyo / ama xumbo leh
Ku jawaab Edu
Waxaan u isticmaalaa laba ama saddex bilood. Anigu ma ihi fucking that.
Maalin kasta waan xiiraa, waxay qaadataa 1 ilbidhiqsi.
1.Shaving mode: jihada timaha, ama dhinaca midig ama bidix ee
jihada timaha (Weligay ma xiirin si ka soo horjeedda jihada timaha) maya
Waxaan isticmaalaa kareemada xiirista ama markaan xiirto ka dib.
Jadwalkeyga caadiga ah: Waxaan xiiraa gebi ahaanba aan dhahno maanta, ka dibna berri aniga kaliya
Waxaan xiirayaa shaarubaheyga, marka marka "gadhka" uu soo muuqdo
Maalintii saddexaad ayaan mar labaad xiiraa.
Kuwa leh nidaamkan joogtada ah ... waxay u keeni doontaa faa'iido, adkaysi wanaagsan oo daab ah, waxay ka fogaan doontaa cuncunka weyn ee maqaarka, si fiican u fiiri midabka kooxda, haddii ay sii yaraaneeyso ... waa Waqtiga aan ku beddelo, marwalba waan isticmaalaa 'gillette' tayo sare Waa kuwo rakhiis ah, iyada oo nidaamkan joogtada ah uu daabkiisu soconayo illaa saddex toddobaad.
Ku jawaab Kirby
Waxaan haystaa gadh xidhan oo mararka qaar waxaan uga tagayaa sidii "quful", taas oo ka baahi badan in aan xiirto wax walba maalin kasta maadaama aan u jaro si aan ugu ekaado mid wanaagsan, marka la soo koobo, kaydadka sumadda ee kaliya igu sii jiraya seddex xiir oo wanaagsan, ka dibna ay lumaan geesooda
Jawaab ku bixi @ntonio
Timberland, Aventura guga-xagaaga 2010 aruurinta
Rolex Submariner, hagaajinta kuwa aan laga adkaan karin?